Shina sy orinasa mpanamboatra plastika plastika maloto China LYBH
Rafitra fitsaboana (omen'ny mpanjifa)
Aorian'ny tsy fikojakojana rano, maina, torotoro ary ireo dingana hafa ireo plastika fako dia afaka mahazo habe sahaza izy ireo.
Ireo plastika fako efa namboamboarina dia entina mankany amin'ny fitoeran'ny tetezamita.
Rafitra pyrolysis mitohy
Ny plastika fako dia ampidirina ao amin'ny reaktor pyrolysis hatrany amin'ny alàlan'ny feeder for pyrolysis.
Ny lasantsy fitaovana fanafoanana dia matetika mampiasa entona mora mirehitra tsy azo ovaina vokarin'ny pyrolysis ny plastika fako, ary ny etona hafanana avo lenta vokariny dia afangaro amin'ny gazy flue voaverina mba hanomezana ny hafanana ilaina.
Rafitra fanasarahana solika sy solika
Aorian'ny fampangatsiahana sy fisarahana ny diloilo sy ny gazy avy amin'ny pyrolyzer mitohy, miditra ao anaty tanky manangona solika ny menaka solika ary entina amina paompin-tsolika mankany amin'ny faritra misy tanky, ary ny entona mora entina mora entina miditra amin'ny rafitra fanadiovana entona mora may.
Rafitra fanadiovana entona azo dorana
Ny entona azo dorana azo avy amin'ny pyrolysis dia nodiovin'ny rafitra fanadiovana entona mora entina ary natsofoka tao anaty fitoeran-tseranana fanamafisana ny tsindry teo ambanin'ny asan'ny fitaovana fanaraha-maso ny tsindry tamin'ny alàlan'ny fantson-drano famehezana ny rano. hafanana ateraky ny fandoroana dia ampiasaina amin'ny pyrolysis an'ny kodiarana fako.
Rafitra fanodinana solika matevina
Ireo vokatra mivaingana avo lenta novokarin'ny entona pyrolysis tsy an-kijanona dia entina mankany amin'ny vokatra silo mafy ataon'ny conveyor aorian'ny fampangatsiahana azy amin'ny mari-pana azo antoka amin'ny alàlan'ny fanamafisana rano amin'ny sehatra maro.
Rafitra fanadiovana gazy flue
Aorian'ny fampangatsiahana ny etona mandrehitra voaverina, dia miditra amin'ny tilikambo fanesorana vovoka sy fofona ary tilikambo fanadiovana entona flue Aorian'ny fanamasinana dingana marobe, toy ny rafi-panala vovoka an-tsaha elektrika plasma sy ny rafitra fanesorana fofona UV, dia mahatratra ny fenitra amin'ny famoahana izany.
Ny tsipika famokarana dia mandray ny rafitra fanaraha-maso PLC / DCS ary manara-maso ny fandefasana data ao anaty rahona mba hanaraha-maso ny fotoana tena izy amin'ny teboka tsirairay ary handefasana azy amin'ny rahona mankany amin'ny console. Ny teboka fanaraha-maso dia afaka mahatsapa ny fahatapahana azo antoka amin'ny kodiarana fako manan-tsaina. Mandritra izany fotoana izany, ny asan'ny fahazoana data, ny kajy, ny firaketana, ny fanaovana tatitra momba ny fanaovana pirinty ary ny fiarovana mialoha ny famokarana dia miantoka ny fiarovana, ny fitoniana ary ny fikirakirana maharitra ny tsipika famokarana.
1.Automatika famokarana mitohy, haitao mandroso, kalitaon'ny solika tsara;
2.Fitao mandeha ho azy tanteraka, hafanana avo, voasarimakirana, fiarovana tontolo iainana ary madio tsy misy vovoka
3.Ny fitaovana rindrambaiko manohitra ny tapa-kazo tokana dia afaka mahatsapa ny famokarana akora manokana.
4. Fahaiza-mitantana lehibe, fahafaha-mitantana isan'andro hatramin'ny 50-100 taonina. Raha tsy misy solika, dia averina indray ny entona tsy milefitra vokarin'ny pyrolysis hanohanana ny fandoroana.
5. Fiarovana ny tontolo iainana ary tsy misy fandotoana, (afaka mifanaraka amin'ny fenitry ny fitsaboana fako mampidi-doza amin'ny ankapobeny) ny vovoka famotehana patentam-pirenena, esory ny vovoka amin'ny entona setroka sy vovoka.
6.Mora ny miasa sy mamonjy asa.
Zavamaniry pyrolysis mitohy
Kodiarana fako, fingotra fako, plastika fako, akrilika fako, fotaka, fako ao an-trano
3.Ny solika azo ampiasaina amin'ny fanodinana pyrolysis
Tsia. Karazana Vokatra solika
1 PVC / PET Tsy afaka manadio
3 p 90%
4 Sal 90%
5 Tariby plastika 80%
7 Kitapo plastika 50%
Teo aloha: Fambolena pyrolysis fako ao an-trano
Manaraka: Fambolena Pyrolysis Tyro tsy tapaka mitohy
30-40tpd Fitaovana mitohy Pyrolysis
Pyrolysis mandeha ho azy
Fitaovana Pyrolysis mandeha ho azy
China Wire Tyres Fitaovana Pyrolysis tsy tapaka
Fambolena Pyrolysis Tyre mitohy
Fitaovana pyrolisis amin'ny fako mitohy
Fitaovana Pyrolysis Bjl5-30tpd Sinoa
Fitaovana Pyrolysis ho an'ny Tyro
Pyrolysis vita amin'ny fingotra
Rafitra fanodinana kodiarana
Fanodinam-bokatra ho an'ny solika
Fitaovana Reyccling Tyro
Fitaovana Pyrolysis Tyro efa niasa
Pyrolisis plastika maloto
Pyrolysis vita amin'ny fako
Rafitra fanodinana fako
Fitaovana fitsaboana fako
Tyro / fako ampiasaina amin'ny famerenana pyrolysis
Kodiarana maloto tsy tapaka Pyrolysis Fitaovana sinoa
Milina fambolena pyrolysis kodiarana
Ho potipotika ny sombin-kodiarana aorian'ny famafazana fehikibo, refin-fehikibo, mpanondrana visy, sns amin'ny tsindry ratsy ao amin'ny rafitra pyrolysis mitohy amin'ny alàlan'ny pyrolysis, ao amin'ny rafitra aorian'ny hafanan'ny fiakaran'ny mari-pana 450-550 ℃ eo ambanin'ny toetran'ny pyrolysis haingana fanehoan-kevitra, mamokatra ny solitany pyrolysis, karbonina mainty, tariby pyrolysis ary gazy mora entona, entona mandoro amin'ny alàlan'ny fisarahana solika fanarenana solika sy gazy aorian'ny fidirana ao amin'ny fatana fandoroana mafana, ho an'ny mpamokatra iray manontolo ...
Batch Pyrolysis Plant, Fambolena Pyrolysis mitohy, Masinina fanodinana plastika, Masinina fanodinana fako, Fanadiovana plastika maloto, Tyro Pyrolysis,